Ejypta: Bilaogera very asa noho ny famoahany ny mahasandoka ny tantaran’ilay fitaovana maha-virjiny hosoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2018 3:04 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, বাংলা, Español, polski, Swahili, Português, English
Raha mbola porofo ho an'ny voninahitry ny ampakarina ao Ejypta sy ny firenena Afovoany Atsinanana ny mandeha rà ny alin'ny fampakaram-bady, nandefa fandikan-teny Arabo tamin'ny dokambarotra Shinoa momba ny fitaovana Hymen maha-virjiny artifisialy ny Radio Netherlands . Nanambara ny gazety Youm7 fa ho hita eny amin'ny tsena Ejiptiana amin'ny LE 83 ny entana. Raha niandry izany hymen mahagaga izany ny vehivavy Ejypsiana mba hiditra amin'ny firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana, te handràra ny vokatra sy handefa an-tsesitany na hanapa-doha izay mpanafatra izany kosa ireo mpikambana mpandala ny nentin-drazana ao amin'ny parlemanta. Nanomboka nanontany tena ny Ejiptiana raha hanomboka hanafatra Hymen Shinoa i Ejypta ary voaraoka kosa i Amira Al Tahawi, izay niara-niasa tamin'ny Radio Netherlands tamin'izany fotoana izany noho ny famoahana fa lainga ny tantara hymen Shinoa namboarina.
Tao amin'ny bilaoginy, Amira Al Tahawi nanoratra hoe:
Eny! Voaraoka aho noho ny lahatsoratra bilaogy navoakako tamin'ny Desambra lasa teo! Tamin'ny 26 Janoary 2010, nahazo taratasy fandroahana mamarana ny asako amin'ny maha mpitati-baovao ao amin'ny Radio Netherlands aho. Tao amin'ny lahatsoratra navoakako, nanaporofo aho fa namoaka vaovao diso tsy voamarina tamin'ny 22 aogositra 2009 ny onjam-peo, vaovao mikasika ny fampidirana “Hymen Artifisialy” Shinoa ao amin'ny tontolo arabo. Ny fampahalalam-baovao nalefan'ny Radio dia nilaza fa namboarina manokana ho an'ireo vehivavy Arabo sy Silamo ilay hymen hosoka, tsy mahalala ny zava-misy fa efa nisy tany Japana nanomboka tamin'ny taona 1993 ny vokatra ary tsy noforonin'ny Shinoa manokana izay nahatsikaritra ny areti-tsaina miavaka mahazo ny vehivavy Arabo izay mila manana maha-virjiny hosoka izany. Nangataka tamin'ny onjam-peo aho mba hanitsy ny fahadisoana misy amin'izany vaovao noforonina izany, izay nalefako mailaka tamin'ny 14 Septambra. Tsy nohainoana akory ny fangatahako ary vavahadin-tserasera Ejiptiana maro no nanaparitaka bebe kokoa ny lainga tsy nisahirana akory hanadihady ny zava-misy na ireo loharanom-baovao voalaza.
Bilaogera maro no nahita fa mampihomehy sy tsy rariny ny fanapahan-kevitra handroaka azy; Nawara Negm nanontany tena hoe:
Nahoana izy ireo no nandroaka azy? Tsy nanoratra zavatra manafintohina momba ny Radio Netherlands akory izy. Na izany aza, nitory azy ireo izy……andeha hanampy azy!
Eman Hashim kosa mitaraina momba ny fahamarinan'ny asa fanaovan-gazety, nanoratra izy hoe:
Feno ireo lazaina ho mpanao gazety mamoaka vaovao sy mamorona “scoop” ao amin'ireo vondrona Facebook ny asa fanaovan-gazety ao Ejypta. Noroahina i Amira ary nolavina ny zony ara-bola sy ara-moraly satria nilaza izy hoe TSIA! Nanoratra ny antsipiriany tao amin'ny bilaoginy i Amira ka andeha hanome fanamafisana ny feony sy hamela ny tsirairay hahalala ny marina. Manome tsiny ny fahanginan'izy ireo izahay saingy tsy maintsy manome mikrô ho an'ireo manana feo. Izany ve no hitantanan'ny Radio Netherland ny vaovao diso? Aiza ny fahamarinan'izy ireo? Aiza ny fanajana ny mpamakiny sy ny mpihaino azy? Mety afaka namoaka fanitsiana mora foana na zavatra hafa izy ireo … na inona na inona. Mampalahelo ny tsy famoahany karazana fanazavana na fanamarinana saingy vazivazy ratsy kosa ny fandroahana mpanao gazety mahatoky noho ny famoahany raharaham-pitaka.
Dr. Mostafa El Nagaar nanoratra fiarovana an'i Amira, hoy izy:
Mijaly noho ny voka-dratsin'ny fahaiza-miasa sy ny voninahiny i Amira. Mizaka ny voka-dratsin'ny fanajana ny etika amin'ny asa fanaovan-gazety izy. Mila olona hiaro azy amin'ny fomba niarovany ireo tovovavy Ejyptiana izy manoloana ireo mpisandoka fa miandry ny hymen hosoka hanafenana ny fahalotoam-pitondran-tenany ireo vehivavy ireo. Mandrisika ny vehivavy Ejyptiana aho mba hamaly ny fankasitrahana ary hiaro an'i Amira izay very asa. Mangataka ny fikambanana rehetra miaro ny zon'ny vehivavy aho mba haneho firaisankina amin'i Amira. Mangataka fialantsiny mazava amin'ny fomba ofisialy avy amin'ireo izay nandoto ny lazanay izahay ary mangataka ireo rehetra izay miteny amin'ny anaran'ny voninahitra aho mba hampiseho ny firaisankinan'izy ireo.
Nandefa fanamarihana tao amin'ny Facebook ihany koa i Mostafa Fathi ary namoaka lahatsoratra tao amin'ny bilaoginy ho firaisankina amin'i Amira i Karim El Beheiry .
Tamin'ny volana Oktobra 2009, nanafatra fitaovana hymen i Mohamed Al Rahal ary nandefa sary tao amin'ny bilaoginy, araka ny voamarika tamin'ny tatitra tao amin'ny Global Voices teo aloha.